Wasiirka arimaha gudaha ee wadanka Uganda iyo wafdi uu hogaaminayo oo Muqdisho kula kulmay madax katirsan dowladda Soomaliya. – Radio Daljir
Mogadishu,Feb 14 -Wefti uu hogaaminayo wasiirka arimaha dibadda ee wadanka Uganda oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay kulamo kale duwan la yeesheen madax katirsan dowladda faderaalka Soomaaliya iyo ururka Midowga Afrika.
Kulanka oo ahaa mid sadex geesood ah,ayaa waxaa looga hadlay dib usoo celinta xasiloonida ka jirtay Soomaliya,teegiridda dowladda faderaalka,howlgalka AMISOM ee Muqdisho.
Kuxigeenka wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika ugu qaybsan Somaliya Waffulu Wa Munyiyi ayaa waxaa uu sheegay ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Muqdisho inay dowladda faderaalka kala shaqayn doonaan xasilinta amaanka Muqdisho.
Wefti uu hogaaminayo wasiirka arimaha dibadda Uganda ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay sidoo kale kulamo la yeesheen madaxwaynaha iyo raysal wasaaraha Soomaliya iyagoona sheegay inay safaarada Uganda inay dib uga howlgalin doonaan magaalada Muqdisho.
Si kastaba ha ahaatee,dowladda Uganda ayaa ka mid ah dowladaha Midowga Afrika ee qaybta ka ah howlagalka Midowga Afrika uu ka wado magaalada Muqdisho ee AMISOM.